Momba anay - Linyi Chenyu New Material Co., Ltd.
Linyi Chenyu New Material Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2000, Any Linyi City, izay fantatra amin'ny anarana hoe "Tanànan'ny varotra malaza" sy "Capital Logistics", izay novolavolaina ny fitaterana, fanaterana mety, dia ny fanangonam-bolan'ny asa lehibe.
Izahay dia mpanamboatra fitaovana vaovao lehibe izay manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fikarohana sy ny varotra plastika aluminium-plastika avo lenta sy antonony, plastika vita amin'ny aliminioma, azo namboarina ihany koa araka ny filan'ny mpanjifa. Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 30 manerantany, ao anatin'izany ny Amerika Avaratra sy atsimo, Eropa, Afrika ary Azia atsimo atsinanana, ary dia noderaina sy eken'ny mpanjifa tokoa.
Ny orinasa dia manana olona ambony sy matihanina ara-teknika sy ara-teknika fitantanana, varotra ary ny sangany hafa, ny mandroso faran'izay mandeha ho azy mafana manery mitambatra famolavolana alimina, haingam-pandeha famokarana tsipika sy ny tohanana fanohanana, mba hahazoana antoka ny tsara kalitao sy ny fifaninanana tombony amin'ny tabilaon'ny plastika Chenyu aluminium, nanjary iray amin'ireo marika manan-danja indrindra amin'ny indostrian'ny birao aluminium-plastika izy io.
Manoloana ny fifaninanana tsena masiaka, ny orinasa chenyu dia hiantehitra amin'ny haitao sarotra, fitaovana kilasy voalohany, olona ambony kalitao, fanavaozana mitohy, serivisy ho an'ny mpanjifa mahafa-po ary hampivoatra vokatra vaovao hifanaraka amin'ny filan'ny tsena, mba handresena sy hitazomana ny tombony mifaninana amin'ny indostria.
Chenyu dia manana ny fitaovana famokarana kilasy voalohany an-trano sy ny fitaovana fanaraha-maso kalitao tonga lafatra. Manaraka ny fitsipika "kalitao aloha, mpanjifa aloha". Miezaka indrindra manatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy amin'ny alalàn'ny fanavaozana ny teknolojia sy ny serivisy.
Chenyu dia manana ekipa za-draharaha miaraka amin'ny fahalalana ny vokatra matihanina, manome anao serivisy aorian'ny fivarotana tsara indrindra, izay mahazo ny fiderana ny mpanjifa. Afaka manome serivisy amin'ny fiteny maro izahay, mora kokoa amin'ny commutication, toy ny anglisy, Russia, Japan, Korea, Spain ect.
Ny tamba-jotra dia misy ny tanibe Shina, Amerika, Azia, Azia atsimo, Eoropa, Moyen Orient, sns. Nahazo laza tsara izahay nandritra ny folo taona. Ny vokatra nomen'ny orinasanay dia be mpampiasa amin'ny sehatra misongadina toa ny injenieran'ny fanamboarana, haingon-trano sns.
Ny vinanay dia ny ho lasa orinasa manerantany mifaninana iraisam-pirenena ary ho lasa mpitarika ny indostria ara-pitaovana vaovao. Chenyu dia manolo-tena hanome ny mpanjifa vokatra sy serivisy lavorary indrindra miaraka amin'ny fitsipiky ny "mpanjifa aloha, ny asa aloha, ny fahitsiana".
Ny mpiasanay dia mifikitra amin'ny firaisan-kina, ny filan'ny nofo, ny fikirizana, ny fifampizarana, ny fandresen-dahatra, hampivondrona izay rehetra afaka miray hina isika, ary ho be fientanam-po sy mahomby hanao ny asanay. Mizara ny fahendrentsika, manokana ny ekipanay, ary farany mahatratra ny toe-javatra mandresy ny mpanjifa, ny mpiasa ary ny orinasa.
Vokatry ny fanohanan'ny mpanjifa mitohy sy manolo-tena mandritra ny tantarany manankarena, Mametraha fiaraha-miasa stratejika miaraka amina orinasa mpivarotra trano mihoatra ny 20 malaza, toa ny vondrona Evergrande 、 Wanke 、 Wanda, sns. Ny fototry ny fiaraha-miasa mahomby amin'ny anay fifanarahana mahasoa ny mpiara-miasa, noho izany dia tombotsoan'ny roa tonta ny manohy fifandraisana miasa salama.
Ny laharam-pahamehan'ny chenyu dia ny fampiroboroboana sy ny fanitarana hatrany ny isan'ireo vokatra atolotra, ny fampiharana ny hevitra mifandraika amin'ny tsena ary ny famokarana vokatra vaovao. Ny fahaiza-manao sy ny maha matihanina ny orinasa ary ny firafitry ny vidin-javatra mifaninana fatratra dia mamorona ny fototry ny fifandraisana salama eo aminay sy ny mpanjifantsika.